ရွှေမြန်မာတို့ ခရီးသွားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွှေမြန်မာတို့ ခရီးသွားခြင်း
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Oct 28, 2018 in Creative Writing, Drama, Essays.., Society & Lifestyle, Think Different, Travel |6comments
⏩ ရွှေမြန်မာတို့ ခရီးသွားခြင်း ⏪
 မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရီးသွားခြင်းအလေ့အထ အတော်လေး ထွန်းကားလာခဲ့ပါပြီ။ ဟိုးအရင်က မိသားစုတွေ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေစုပြီး သွားကြတဲ့ ဘုရားဖူးခရီးကနေ အလည်အပတ်ခရီး၊ အပန်းဖြေခရီး၊ တောင်တက်ခရီး၊ တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခရီး၊ အပျော်စီးသင်္ဘောခရီး စသဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်မျိုးစုံကို သီးသန့်၊ အဖွဲ့လိုက် သွားကြတဲ့အထိ ခရီးသွားခြင်းအလေ့အထဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
 လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ မြန်မာတွေ ဘာလို့ခရီးသွားလဲဆိုရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ လို့ပဲ ဖြေရမယ်ထင်ပါရဲ့။ မြန်မာလူမျိုးတွေအများစုဟာ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ခရီးသွားလို့ တစ်နေရာရောက်ပြီဆိုရင် ရှုခင်းလှလှကို နောက်ခံထားပြီး ကိုယ့်ပုံကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြမယ်။ ပြီးရင် Social Media တွေမှာ Check-in ဝင်မယ်၊ ဓာတ်ပုံတင်မယ်။ ပြီးရင် နောက်တစ်နေရာကို ဆက်သွားကြမယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ခရီးစဉ်တွေ ပြီးဆုံးသွားကြတာ များပါတယ်။
 ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ခရီးကပြန်လာရင် ဖုန်းထဲ (သို့မဟုတ်) ကင်မရာထဲမှာ ပုံလှလှလေးတွေ ပါလာတာကလွဲပြီး အဲဒီနေရာအကြောင်း၊ သမိုင်းကြောင်း၊ လူနေမှုအကြောင်း၊ မတူကွဲပြားမှုတွေအကြောင်း၊ အသစ်အဆန်းတွေအကြောင်း ဘာဆိုဘာမှ ပြန်ပြောတာမရှိကြပါဘူး။ ရှင်းပြမယ့်သူရှိရင်တောင် နားမထောင်ဘဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပဲ အချိန်ပေးချင်ကြတာပါ။ ပိုပြီးနှမြောဖို့ကောင်းတာက အရမ်းလှတဲ့ရှုခင်းတွေကိုတောင် မျက်စိနဲ့ မခံစားဘဲ live လွှင့်ဖို့၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တွေအတွက် screen ကတစ်ဆင့် ကြည့်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
 ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ ဘုရားပေါင်းများစွာမှာ ဘုရားရှိခိုးပြီး ပြန်ထွက်လာတာထက် ပိုပါတယ်။ ရှုခင်းတစ်ခု၊ အဆောက်အအုံတစ်ခုကို နောက်ခံထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တာထက် ပိုပါတယ်။ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ဒေသကို ရောက်လာတဲ့အခါ၊ ရောက်ဖူးပြီးရင်တောင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ်နေထိုင်ရာနဲ့ မတူညီတဲ့ နေထိုင်မှုတွေ၊ ရိုးရာဓလေ့တွေ၊ ရှင်သန်နေထိုင်ကြပုံတွေ၊ အတုယူစရာကောင်းတာတွေ၊ ရှောင်ကျဉ်သင့်တာတွေကို လေ့လာပါ။ လှပတဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်သဘာဝရှုခင်းကို ပကတိမျက်စိနဲ့ ခံစားပါ။ ဒေသခံတွေလို နေထိုင်ပါ။
✔️ Travelling is to escape from daily life.
✔️ Travelling is for learning.
 နေ့စဉ်ဘဝထဲက ခဏတာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ မတူညီတာတွေကို လေ့လာခံစားရင်း အကျိုးရှိရှိ ခရီးသွားကြရအောင်။
ဟုတ်တယ်..ငါဆို..သွားခဲ့ဖူးတာလေးတွေ မေ့မသွားအောင် ဘလော့ပြန်ပြန်ရေးတယ်..ပြီးရင်အမှတ်တရလေးတွေဘာတွေကျန်
ခဲ့လဲ..တချိန်ချိန်ကျလို့ ပြန်ဖတ်တဲ့အခါ..အော် ငါဒီခရီးမှာဒီလိုလေးဖြစ်ခဲ့ပါလားဆိုတာလေးတွေဖတ်ပြီး ပီတိရချင်လို့။
ဒီနရောမှာ local guide တှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍက အရေးပါပါတယျ
ကိုယျ့ဒသေအကွောငျး တစှနျးတစဘဲသိပွီး လာလညျတဲ့ ဧညျ့သညျတှကေို
ဒသေခံတှအေကွောငျး ပွောပွမှာလား ရိုးရာဓလတှေ့အေကွောငျး ပွောပွမှာလား
ဒါမှမဟုတျ လူသိနညျးသေးတဲ့ secret places တှအေကွောငျး လကျတို့မှာလား
စသညျွဖငျွ့ပောမယျဆိုရငျတော့ အစုံပါမှာဘဲ
ဒသေခံ အမြားစု (ကားမောငျးသူမှအစ၊ လမျးတလြှောကျ တှသေ့မြွမငျသမြ လူအဆုံး)
သူတို့ဒသေကို ဧညျ့သညျလာတာဟာ Tourism ဖှံ့ဖွိုးလာလို့ ဖွဈတယျဆိုတာရယျ
နယျခံတှရေဲ့ စီးပှါးရေးလုပျငနျးတှေ (စားသောကျဆိုငျ၊ ကားငှားတဲ့ဝနျဆောငျမှု၊ ဟိုတယျမှအစ
Beauty saloon အဆုံး ) ဖောကျသညျတိုးလာတယျဆိုတာကို သတိပွုမိဖို့လိုပါတယျ
ဒါမှဘဲ တနယျတကြေးက လာလညျတဲ့လူတှေ ဘုမသိ ဘမသိ ဓါတျပုံရိုကျပွီွးပနျရတဲ့ အဆငျ့ကနေ
ကိုယျလညျပတျခဲ့တဲ့နရောရဲ့ သမိုငျးကွောငျး အနညျးအကြဥျးသိပွီး ပွနျရတဲ့ အဆငျ့ကိုရောကျမှာပါ
ဒါက ဒသေခံတှသော ဧညျ့လမျးညှနျဖွဈခဲ့ရငျ ဆိုတဲ့ အွခေအနကွေိုပောကွညျ့တာ
မဟုတျလို့ ရနျကုနျကနေ အစအဆုံး စီစဥျပွီး ရောကျလာတဲ့ လူတှဆေိုရငျတော့
ကားမောငျးပွီးလိုကျပို့တဲ့လူ ပွောပွတာထကျ ကြျောပွီး သိရဖို့ အကွောငျးမရှိပါဘူး
Tour Company တှေ စဥျးစားရမဲ့အလုပျတှကေို ကိုယျ့အလုပျမှတျွပီး ၀ငျပှါးပါတယျ (ပငျြးပငျြးရှိတာနဲ့ အလညျလာရငျး မနနေိုငျမထိုငျနိုငျ ၀ငျရေးတဲ့ ကှနျမနျ့လေးဘာလို့ဈ)
Sorry for Myanmar2 Font.
I don’t know what to do to get proper MM Font here
(ဒါက မနြ် မာ သရီး)
စသညျွဖငျွ့ပောမယျဆိုရငျတော့ အစုံပါမှာဘဲ
ဒါက ဒသေခံတှသော ဧညျ့လမျးညှနျဖွဈခဲ့ရငျ ဆိုတဲ့ အွခေအနကွေိုပောကွညျ့တာ
(ဒါက ဇျော၈ြီဖောငျ့၊ လကျကှကျမမှတျမိ၊ စမျးရိုကျကြိသလောကျ အဆငျမပွေ)
ဒါကတော့ ညီမလေးရယ်… ခေတ်အခြေအနေတွေက ပြောင်းလဲလာတဲ့အလျောက် ခရီးသွားခြင်းအရသာကို ပြည့်ပြည့်၀၀ မခံစားကြတော့ပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပိုမိုအာသန်လာကြတာကတော့ အထင်အရှားပါပဲ…